တရုတ် စက်မှု ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်မှု
တရုတ်စက်မှုထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ ဒေတာကို ဂျူလိုင်လ ၁၇ရက် ၅:၀၀MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပါမည်။.
ယခုထွက်ရှိမည့် ဒေတာသည် တရုတ်စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် အရေးကြီးသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအင်အားဖြင့် လွှမ်းမိုးနိုင်မှု အခြေအနေနှင့် တရုတ်စီးပွားရေးအပေါ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ၏ သဘောထားကိုပါ သိရှိနိုင်မည့်အတွက် ဈေးကွက်က စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေရသည့် ဒေတာအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်. ယခုထွက်ရှိမည့် ဒေတာ အားမကောင်းခဲ့ပါက ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများသည့် ငွေကြေးအတွဲများဖြစ်သည့် AUDနှင့် NZDတို့လို ငွေကြေးအတွဲများ တန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်ပါသည်. ဒေတာထွက်ရှိမှု အားကောင်းခဲ့ပါက အာမခံချက်ရှိသည့် ခိုင်မာသည့် ငွေကြေးအတွဲများဖြစ်သည့် ယန်းနှင့် ဆွစ်ဇာလန်ငွေကြေး ဖရန့်တို့ကဲ့သို့သော ငွေကြေးများအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါသည်.